Nleta ndị na-ege ntị: Nkebi nke ndị na-ege ntị ọgụgụ isi na ngwanrọ nyocha | Martech Zone
Tọzdee, Disemba 23, 2021 Tọzdee, Disemba 23, 2021 Douglas Karr
Atụmatụ dị mkpa na ihe ịma aka mgbe ị na-emepe emepe na ịzụ ahịa ika bụ ịghọta onye ahịa gị bụ. Ndị na-ere ahịa dị ukwuu na-ezere ọnwụnwa nke ịkọ nkọ n'ihi na anyị na-enwekarị mmasị na ụzọ anyị. Akụkọ dị egwu sitere na ndị na-eme mkpebi ime ime bụ ndị na-enwe mmekọrịta na ahịa ha anaghị ekpughekarị echiche ndị na-ege anyị ntị bụ n'ihi ihe ole na ole:
Atụmanya kasịnụ ma ọ bụ ndị ahịa abụghị nkezi ma ọ bụ atụmanya kacha mma ma ọ bụ ndị ahịa.
Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ nwere ike ịnwe isi ahịa ndị ahịa, ọ pụtaghị na ọ nwere ezigbo ntọala ahịa.
A na-eleghara akụkụ ụfọdụ anya n'ihi na ha dị ntakịrị, mana o kwesịghị ịbụ n'ihi na ha nwere ike nwetaghachi azụ azụ kacha elu na ntinye ego ahịa.
Data mmekọrịta bụ ọla edo maka ikpughe ndị na-ege ntị na akụkụ n'ihi ọgaranya, nnukwu data dị. Ịmụ igwe na ikike ịhazi data ahụ na-eme ka ikpo okwu nwee ọgụgụ isi chọpụta akụkụ ndị na-ege ntị na nyochaa omume, na-enye nghọta na-arụ ọrụ nke ndị na-ere ahịa nwere ike iji mee ka ebumnuche ka mma, hazie, na nweta nsonaazụ dị elu.
Kedu ihe bụ ọgụgụ isi ndị na-ege ntị?
ọgụgụ isi ndị na-ege ntị bụ ikike nke ịghọta ndị na-ege ntị dabere na nyocha nke onye ọ bụla na nchịkọta data gbasara ndị na-azụ ahịa. ọgụgụ isi ndị na-ege ntị nyiwe na-enye nghọta na akụkụ ma ọ bụ obodo ndị na-akpụzi ndị na-ege ntị, ndị na-ege ntị psychographics na demographics mgbe nwere ikike ijikọ ndị na-ege ntị akụkụ na-elekọta mmadụ ege ntị na nyocha nyiwe, influencer marketing ngwaọrụ, dijitalụ mgbasa ozi nyiwe na ndị ọzọ ahịa ma ọ bụ ahịa nyocha ụlọ ahịa.
Ọgụgụ isi nke ndị na-ege ntị Audiense
Audiense na-enyere ụdị aka iji chọpụta ndị na-ege ntị dị mkpa nwere nghọta nwere ike ime nke na-enyere aka ịkọwa atụmatụ iji kwalite azụmahịa gị. Site na Audiense Insights, ị nwere ike:
Chọpụta ndị na-ege ntị ma ọ bụ akụkụ ọ bụla - Okwu na-enye gị ohere ịchọpụta ma ghọta ndị na-ege ntị ọ bụla, n'agbanyeghị otú ọ dị kpọmkwem ma ọ bụ dị iche iche na-eduzi nyocha ndị na-ege ntị na-elekọta mmadụ. Na-agbasi mbọ ike na-ejikọta ọtụtụ nhọrọ nzacha mgbe ị mepụtara akụkọ, dị ka profaịlụ onye ọrụ, affinities, demographics na ọrụ ọrụ, na-ekepụta akụkụ ndị na-ege ntị ahaziri nke ọma. Ejiri ya Audiense nghọta ị nwere ike ikpughe ọgụgụ isi ndị na-ege ntị iji mee mkpebi ịzụ ahịa ka mma, gbanwee ebumnuche gị, melite mkpa ma kwalite mkpọsa arụmọrụ dị elu n'ogo.
Ghọta ozugbo onye mebere ndị na-ege gị ntị - Audiense nghọta metụtara ngwa igwe ịghọta ngwa ngwa onye na-eme ka ndị na-ege gị ntị lekwasịrị anya, site na nyocha njikọ dị n'etiti ndị na-akpụzi ya. Gafee ngalaba ọdịnala dabere na afọ, okike na ọnọdụ, ugbu a ị nwere ike ịchọpụta akụkụ ọhụrụ dabere na mmasị ndị mmadụ na ghọta ahịa ebumnuche gị ugbu a na ọkwa miri emi. Usoro ọgụgụ isi nke ndị na-ege ntị na-enye gị ohere iji akụkụ dị iche iche tụnyere ntọala ntọala ma ọ bụ ndị ọzọ na-ege ntị wee mepụta akara ngosi na akụkụ dị iche iche, mba ma ọ bụ ọbụna ndị asọmpi ndị ọzọ.
Nweta data gị - imekota Audiense nghọta na data nke gị ma ọ bụ visualizations. Naanị bupụ akụkọ gị na PDF or Power Point usoro iji jiri nghọta kachasị mkpa gbasara ndị na-ege gị ntị na oche ngosi gị. Ma ọ bụ ọzọ, bupụ nghọta nke ọ bụla na a CSV faịlụ ka ị nwee ike hazie, kesaa ma ọ bụ jikọta ha na nzukọ gị n'ụzọ dị mfe.
Otu esi emepụta akụkọ ọgụgụ isi nke ndị na-ege gị ntị efu
Nke a bụ vidiyo nyocha maka otu esi eji OkwuAtụmatụ efu iji mepụta akụkọ Insights site na iji ọkachamara okike ndị na-ege ntị. Ekwela ka okwu a isi ghọgbuo gị, ezie. Akụkọ ahụ na-enye igwe mmadụ, mpaghara ala, asụsụ, ndụ ndụ, afọ, akụnụba mmekọrịta ọha na eze, mmekọrịta ika, mmetụta ika, mmasị, mmekọrịta mgbasa ozi, ọdịnaya, ụdị mmadụ, echiche ịzụrụ, omume ịntanetị na akụkụ 3 kachasị elu!
Zụlite nyocha nyocha nke ndị na-ege ntị efu
Ngosi: Abụ m Mgbakwunye maka Okwu ma m na-eji njikọ m na edemede a.
Tags: nyocha ndị na-ege ntịọgụgụ isi ndị na-ege ntịnghọta ndị na-ege ntịnyocha ndị na-ege ntị ikanyocha ikaọgụgụ isi asọmpinyocha nke ndị ahịaprofaịlụ nke ndị ahịanyocha nke ndị na-eso ụzọndị na-eso ụzọnyocha nke mmetụtankewanyocha mgbasa ozi mgbasa oziprofaịlụ mgbasa ozi